सुदूरपश्चिमका ८ जिल्लामा आज एमाले अधिवेशन , कुन जिल्लामा को आकांक्षी ?
सुदूरपश्चिमका ८ जिल्लामा आज नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशन हुँदैछ । बझाङ बाहेक कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, बैतडी, अछाम, दार्चुला डडेल्धुरा र बाजुरामा आज जिल्ला अधिवेशन हुन लागेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ बाहेक ८ जिल्लामा आज अधिवेशन हुन लागेको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव धर्मराज पाठकले बताए । बझाङमा भने केही समयपछि अधिवेशन हुनेछ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज बिहान ११ बजे जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन एकैसाथ भर्चुअलरुपमा गर्ने तय भएको छ । अधिवेशनले जिल्लामा नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्ने छ ।
कुन जिल्लामा को आकांक्षी ?
कञ्चनपुरमा अध्यक्षमा ३ जना आकांक्षी देखिएका छन् । कञ्चनपुरमा वर्तमान अध्यक्ष वीरबहादुर थापा, सचिव सुरेन्द्र विष्ट र बेदकोट नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार चन्द अध्यक्षका आकांक्षी छन् । कैलालीमा एमालेका वर्तमान अध्यक्ष रतन थापा, उपाध्यक्ष रणबहादुर चन्द र जिल्ला सचिवालय सदस्य डेजी पाण्डे आकांक्षी छन् ।
नवौँ महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा निर्वाचित थापा र सचिवमा निर्वाचित चन्दले एमाले विभाजनपछि अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पद सम्हालिरहेका थिए ।
डडेल्धुरामा अध्यक्षका लागि ४ जनाले इच्छा देखाएका छन् ।
वर्तमान अध्यक्ष प्रकाश साउँद, अमरगढी नगरपालिकाका मेयर विशेश्वरप्रसाद ओझा, राष्ट्रिय युवा संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गजेन्द्र शाही र प्रदेश कमिटी सदस्य तथा अधिवक्ता पदम पाल अध्यक्षका आकांक्षी देखिएका छन् ।
बैतडीमा पनि वर्तमान अध्यक्ष सुरेन्द्र पाल र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । दार्चुलामा वर्तमान अध्यक्ष रामदत्त जोशी पुनः अध्यक्ष बन्ने दाउमा छन् ।
उनीसँगै नौगाढ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमसिंह धामी, एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य मोहनसिंह धामी, वर्तमान उपाध्यक्ष उदयसिंह बडाल, ज्ञानेन्द्र घर्ती पनि अध्यक्षका लागि आकांक्षी छन् । तर, वर्तमान अध्यक्ष पुन अध्यक्ष बन्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
बाजुरामा कालीबहादुर शाही, भरत थापा, र लालबहादुर ओली अध्यक्षका आकांक्षी छन् । शाही वर्तमान अध्यक्ष हुन् । थापा र ओली भने पदाधिकारीमा छैनन् । तर, तीनै जना लोकप्रिय नेता मानिन्छन् ।
अछाममा प्रकाश शाह, चन्द्र बोहरा र कृष्णप्रसाद जैसी अध्यक्षको दौडमा छन् । शाहले पत्रकार सम्मेलन नै गरे अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् । अन्य दुई नेता भने आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् ।